May 24, 2019 - MM Live News
ှိအသက် ၄၀ ကျော် လာတာနဲ့ယောင်္ကျား ဖြစ်ဖြစ် မိန်းမ ဖြစ်ဖြစ် ဒီဆေးလေးသာ မှီဝဲလိုက်ပါ…
အသက် ၄၀ ကျော် လာတာနဲ့ယောင်္ကျား ဖြစ်ဖြစ် မိန်းမ ဖြစ်ဖြစ် ရိုးတွင်း ချဉ်ဆီ ခမ်းလာ တတ်ပါတယ် ။ အိမ်ထောင်သည်တွေ ပိုဆိုး ပါတယ် ။ ရိုးတွင်း ချဉ်ဆီ ခမ်းလာရင် အရွယ်ရင့်မြန်လာခြင်း မလှုပ်ချင် မကိုင်ချင် မကြာခဏ ဖြစ်ခြင်း ယောင်္ကျား ဆိုလျှင် ဒူလာဖြစ်ခြင်း ပြင်ပ ရောဂါ ဝင်လွယ်ခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ ယခု တင်ပြ မှာက မြန်မာ့ တိုင်းရင်းနည်း ဖြင့် ရိုးတွင်း ချဉ်ဆီ အားကောင်း နည်းလေးပါ ။ ဆေးနည်း ဖီးကြမ်း ဌက်ပျောသီးကို မီးဖုတ်ပါ ။ ပြီးလျှင် ခွက် တစ်ခုထဲ ထည့်ပါ ။ နှမ်းဆီ စစ်စစ် […]
ဒီပုံလေးfb ပေါ်တက်လာတာတွေ့တော့ တွေ့တွေ့ချင်း လှောင်ပြီးဟားတိုက်ရယ်မိတယ် ….ဒီလောက်ရူးရသလားပေါ့ …. ပြီးမှကြည့်နေရင်းကြည့်နေရင်းနဲ့ မရယ်ရက်တော့ပဲ မျက်ရည်ဝိုင်းလာမိတယ်….
မယားကိုသစ်​ပင်​မှာတွဲလောင်​ချည်​ပြီးတော့.ယောကျာ်းနဲ့ အဖော် တစ်ဦး က ရက်စက်ခဲ့တဲ့ အမှု
May 24, 2019 May 24, 2019 MM Live News
မယားကိုသစ်​ပင်​မှာတွဲလောင်​ချည်​ပြီးတော့.ယောကျာ်းနဲ့ အဖော် တစ်ဦး က ရက်စက်ခဲ့တဲ့ အမှု ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်း နောင်ဘိုလမ်းဖူးခရိုင်ထဲမှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ဇနီးကို လက်နှစ်ဖက်ကြိုးတုပ် သစ်ပင်မှာ တွဲလွဲချည်ပြီး မီးခိုးငွေ့တွေနဲ့ မှိုင်းတိုက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပို့စ်တစ်ခုကို Ai Aum ဆိုတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်နဲ့ မေ ၂၄ ရက် နေ့စွဲနဲ့ တင်ထားပြီး မိန်းကလေးမှာ သူနဲ့ ဆွေမျိုးတော်စပ်တယ်၊ ဘာကြောင့်မှန်းမသိဘဲ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက သူမကို လက်ပြန်ကြိုးတုပ် ဒရွတ်တိုက်ဆွဲကာ အဲဒီသစ်ပင်နားမှာ လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီး ၄ နာရီကြာ တွဲလွဲချည်ထားတယ်၊ ဘေးနားမှာလည်း ကောက်ရိုးတွေနဲ့ မီးဖိုထားပြီး မီးခိုးမှိုင်းတိုက်ခဲ့တယ်၊ သူ့ယောကျာ်းနဲ့ အဖော်အမျိုးသားတဦး ဘေးကနေ အရက်ထိုင်သောက်ပြီး သူမဒုက္ခကို ထိုင်ကြည့်နေတယ်၊ ကြည့်ရတာ မိန်းကလေးကို မီးရှို့သတ်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် […]
အသက်​ ၁၀ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးအား နားကပ်​လုပ်​​ပေးမယ်​​ဟုပြောပြီး သားမယားအဖြစ်​ပြုကျင့်​မှုဖြစ်ပွား….
24.5.2019 နားကပ်​လုပ်​​ပေးမယ်​​ဟုပြောပြီး ​ဆေးလိပ်​ဝယ်​ခိုင်းရာမှ သားမယားအဖြစ်​ပြုကျင့်​ ​ဧရာဝတီတိုင်း​ဒေသကြီး ၊ ဟင်္သာတခရိုင်​လေးမျက်​နှာမြို့ နယ်​ ၊ ဝတ်​ကုန်း​ကျေးရွာအုပ်​စု ၊စမ်းကုန်း​ကျေးရွာ​တွင်​၂၅.၄.၂၀၁၉ ရက်​​နေ့နံနက်​ ၁၀ နာရီ​ကျော်​အချိန်​ခန့်က သက်​ငယ်​မုဒိန်းမှု ဖြစ်​ပွားသည်​ဟုကြားသိရသည်​။ ဖြစ်​စဉ်​မှာ စမ်းကုန်း​ကျေးရွာ​နေအဖ ဦး​ —- + အမိ ​ဒေါ်—– တို့ ၏ သမီးမ —— အသက်​ ၁၀ နှစ်​ အားတစ်​ရွာထဲ​နေထိုင်​သူအဖ ဦးဝင်း​ရွှေ အမိ ​ဒေါ်ရင်​ကြည်​ ​တို့ ၏သားဖိုး​တေ ( ခ ) ​​တေဇာလင်း အသက်​ ၃၄ နှစ်​ မှမ —– သည်​ မိသားစုနှင့်​အတူ ထမင်းစား​နေချိန်​တွင်​ ​ဆေးလိပ်​ဝယ်​​ပြီးလာပို့ ​ပေးပါ….. ငါနားကပ်​လုပ်​​ပေးမယ်​ဟု လာ​ရောက်​​ပြောပြီးအိမ်​သို […]
မန္တလေးမြို့တွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီးနောက် လူ (၁) ဦးသေဆုံးကာ (၇) ဦး ဒဏ်ရာရရှိ……
မေလ ( ၂၃ ) ရက် ညပိုင်း ( ၉ ) နာရီအချိန်က မန္တလေးမြို့ တွင် လေပြင်းတိုက် ခတ် မှု ကြောင့် ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်ရှိ ဇီးအုပ်ကွက်သစ်တွင် အိမ်ခြေ အလုံး(၁၀၀)ကျော် ပျက်စီး ပြီး လူ (၁ ) ဦးသေဆုံးပြီး ( ၇ ) ဦး ဒဏ်ရာ ရ ရှိ ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ” မနေ့ ညက လေပြင်းတိုက် လိုက်တဲ့အခါမှာ အိမ်တွေ အများကြီး ပျက်စီးသွားတယ်။ ကျေးရွာ က လူကြီးတွေ လာပြီး အိမ်တွေကိုလာရောက် စစ်ဆေးပါတယ်။ လေပြင်းတိုက်ခတ်မှု အတွက် သေဆုံးတာကတော့ […]
လိင်ကိစ္စပြုနေသံ များကို တရားရုံးသို့တင်သွင်းလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ တရားလိုသင်းသင်း …..
ဝေဠုကျော်နှင့်သင်းသင်းအမှု ယနေ့ရုံးချိန်းတွင် ဖုန်းအသံဖိုင်များရုံးတော်သို့တင်သွင်း။လာရောက်နားထောင်သူများပြား အလှမယ် သင်းသင်းက သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော်ကို ကာမလိမ်လည်ရယူမှု ပုဒ်မ (၄၁၇) ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည့်အမှုကို ယနေ့ မေ ၂၄ ရက်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တရားရုံးတွင် ၉ ကြိမ်မြောက် ရုံးချိန်းခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ယနေ့ရုံးချိန်း တရားရုံးခွင်တွင် ဝေဠုကျော်နှင့် သင်းသင်းတို့အကြား ဆက်သွယ် ခဲ့သည့် ဖုန်းအသံဖိုင်များ ။ လိင်ကိစ္စပြုနေသံများ အင်းးးးအင်းးးအားးအားးးးများကို တရားလိုသင်းသင်းဘက်က တရားရုံးသို့တင်သွင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါအမှုတရားသူကြီးမှ အသံဖိုင်များကိုနားထောင်အပြီးအမှု၏ ၁၀ ကြိမ်မြောက် ရုံးချိန်းကို ဇွန် ၅ ရက်တွင် ဆက်လက် စစ်ဆေးရန်အတွက် တရားရုံးက ရုံးချိန်းထပ်မံချိန်းဆိုခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ TCM ရဲ ဇော် unicode ဝဠေုကြျောနှငျ့သငျးသငျးအမှု ယနရေုံ့းခြိနျးတှငျ ဖုနျးအသံဖိုငျမြားရုံးတျောသို့တငျသှငျး။လာရောကျနားထောငျသူမြားပွား အလှမယျ သငျးသငျးက […]
ရက်စက် ယုတ်မာချက်… 23 .5. 2019 ယနေ့ ၁၇:၂၅ နာရီကန့်ဘလူ-ကျွန်းလှ ဘူတာအကြား မိုင်တိုင် ၄၉၄/၅မှ ၄၉၄/၁၀ အထိ မီးရထား သံလမ်းပေါ်၌ ကျောက်တုံးအကြီးများ၊ဖါးတုံးအပိုင်းစများနှင့် ကွန်ကရိဖါး ကလစ်များတင်ထားသည်ကို ပုံပါအတိုင်းတွေ့ရှိရပြီး အမှတ် ၄၇ အဆန် မန္တလေး-နဘားရထားမှာအချိန်မှီရပ်တန့်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ Alien Thit Photo:Credit Credit.Yin Thein #HlaingMinZaw unicode version… ရကျစကျ ယုတျမာခကျြ… 23 .5. 2019 ယနေ့ ၁၇:၂၅ နာရီကနျ့ဘလူ-ကြှနျးလှ ဘူတာအကွား မိုငျတိုငျ ၄၉၄/၅မှ ၄၉၄/၁၀ အထိ မီးရထား သံလမျးပျေါ၌ ကြောကျတုံးအကွီးမြား၊ဖါးတုံးအပိုငျးစမြားနှငျ့ ကှနျကရိဖါး ကလဈမြားတငျထားသညျကို ပုံပါအတိုငျးတှရှေိ့ရပွီး […]
၈ တန်းကျောင်းသူလေးကို ၈ နှစ်ကျော်ကြာ အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သူကို အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် ၂၃ နှစ်ချမှတ်
မယားပါသမီးအား ၈ နှစ်ကျော်ကြာ အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သူကို အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် ၂၃ နှစ်ချမှတ် ၁၄ နှစ်အရွယ် မယားပါသမီးအား ၈ နှစ်ကျော်ကြာ အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သူကို မြောင်းမြခရိုင်တရားရုံးက မေလ ၂၃ ရက်မှာ အလုပ်နဲ့ထောင်ဒဏ် ၂၃ နှစ်ပြစ်ဒဏ် အမိန့်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ မြောင်းမြခရိုင်တရားရုံးက သိရပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်းမြမြို့နယ်၊ ဆင်ကူးကျေးရွာအုပ်စုနေ ကျောင်းဆရာမတဦးဖြစ်တဲ့ မိခင်ဖြစ်သူဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်က ဖောင်ကြီးသင်တန်း တက်ရောက်နေစဉ် နေအိမ်မှာ ပထွေးဖြစ်သူ ဇော်ဌေး ၄၂ နှစ်နဲ့ ထားခဲ့ရာမှ သမီးဖြစ်သူ အဋ္ဌမတန်းကျောင်းသူကို အကြိမ်ကြိမ်အဓမ္မပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ မခင်ဖြစ်သူ သင်တန်းပြီးဆုံးပြီး ပြန်ရောက်ချိန် သမီးဖြစ်သူက အကြိမ်ကြိမ် အဓမ္မပြုကျင့်ခံရကြောင်း ပြောခဲ့ပေမယ့် ပထွေးဖြစ်သူက တိုင်ကြားရင် နှစ်ယောက်စလုံးကို သတ်ပြစ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တာကြောင့် ၈ […]
တပတ်မှာ မုဒိန်းမှုသတင်းမျိုးက ၅ ရက်လောက် တွေ့နေရတယ်
တပတ်မှာ မုဒိန်းမှုသတင်းမျိုးက ၅ ရက်လောက် တွေ့နေရတယ် မတ္တရာမြို့လွန်​​တောင်းရွာက ၁၆နှစ်​အရွယ်​ သမီး​လေး မတ္တရာက သူ​နေ​သောလ္ဘက်​ရည်​ဆိုင်​ပိုင်​ရှင်​က​ ခြေ​တော်​တင်​​စော်​ကားလိုက်​တာ အခု ကိုယ်​ဝန်​ ၄လ​ကျော်​​ ရောက်​လာပြီ မသိနားမလည်​ ရိုးအသူက​လေးမှာ ရွာမှာမျက်​နှာငယ်​​နေရခိုင်​နှင်း​ဝေ ပရဟိတနှင့်​ ချိတ်​ဆက်​ပြီး ချက်​ချင်း လှမ်း၍အကူအညီ​တောင်း ချိတ်​ဆက်​ က​လေးကျန်းမာ​ရေး​မွေးပြီး​ ပေးပစ်​မယ်​ဆိုလို့ ကေ​လး​နှင့်မိခင်ကျန်းမ​ရးအတွက်ေ​မွးစားစောင့်​​ရှောက်မဲ့အဖွဲ့နှင့် ချိတ်​ဆက်​​ကူညီ​ပေးတာပါ။ မျိုးချစ်​ Paralegal Network ပရဟိတ မတ္တရာမြို့ ✆ 09256033694 တပတမြှာ မုဒိနြးမှုသတငြးမွိုးက ၅ ရကလြောကြ တှနေ့ရတေယြ မတျတရာမှို့လှနြ​​တောငြးရှာက ၁၆နှစြ​အရှယြ​ သမီး​လေး မတျတရာက သူ​နေ​သောလျဘကြ​ရညြ​ဆိုငြ​ပိုငြ​ရှငြ​က​ ခှေ​တြော​တငြ​​စြော​ကားလိုကြ​တာ အခု ကိုယြ​ဝနြ​ ၄လ​ကွြော​​ ရောကြ​လာပှီ မသိနားမလညြ​ ရိုးအသူက​လေးမှာ ရှာမှာမကြွ​နှာငယြ​​နရခေိုငြ​နှငြး​ဝေ ပရဟိတနှငြ့​ ခွိတြ​ဆကြ​ပှီး […]